Otú Gị na Nne na Nna Di Gị ma Ọ Bụ Nne na Nna Nwunye Gị Ga-esi Na-adị n’Udo | Ihe Ndị Ga-enyere Ezinụlọ Aka
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bengali Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Marathi Myanmar Nepali Norwegian Pangasinan Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Telugu Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
Otu nwoke aha ya bụ Chibueze * kwuru, sị: “Mgbe mụ na nwunye m sere okwu, ọ gara kọọrọ papa ya na mama ya. Papa ya mechara kpọọ m gwawa m okwu. Ihe ahụ o mere were m iwe.”
Otu nwaanyị aha ya bụ Onyinyechi kwuru, sị: “Nne di m na-ekwukarị na ọ na-ewute ya na ya na nwa ya nwoke ebighịzi. Ọ na-ekwukwa na ya na di m bụbu nnu na mmanụ. Mgbe ọ bụla o kwuwere ụdị ihe a, ọ na-adị m ka m̀ mere ihe ọjọọ lụọ nwa ya nwoke.”
Di na nwunye ò nwere ike ime ka papa ha ma ọ bụ mama ha ghara ime ka ha na-ese okwu?
Nwoke lụọ nwaanyị, ya na nwunye ya amalitela ezinụlọ nke ha. Baịbụl kwuru na nwoke lụọ nwaanyị, ya ahapụ “nna ya na nne ya wee rapara n’ahụ́ nwunye ya.” Nwaanyị ga-ahapụkwa nne na nna ya ma ọ lụọ di, ya na di ya abụrụzie “otu anụ ahụ́” ma nọrọ n’ezinụlọ nke ha.—Matiu 19:5.
O kwesịghị ịbụ ihe ọ bụla merenụ gị agbara gaa kọọrọ papa gị na mama gị. Otu nwoke na-enye ndị lụrụ di na nwunye ndụmọdụ kwuru, sị: “Di na nwunye kwesịrị ịna-emekọ ihe ọnụ. Ọ bụrụ na mmadụ chọrọ ka ya na di ya ma ọ bụ nwunye ya na-enwe otu olu n’ihe ọ bụla ha na-eme, ọ bụghị ihe niile ha chọrọ ime ka ụmụnne ha ma ọ bụ papa ha na mama ha ga-etinye ọnụ.”
Ọ na-adị ụfọdụ ndị nne na nna ka nwa ha alụbeghị di ma ọ bụ nwunye. Otu nwoke kwuru, sị: “Tupu m lụọ nwaanyị, ihe ọ bụla papa nwunye m na mama ya kwuru ka ọ na-achọkarị ime. Mgbe anyị gbachara akwụkwọ, o doro mama ya anya na ọ bụghịzi ihe niile ọ gwara nwa ya nwaanyị ka ọ na-eme. Ma, otú ihe si dị ugbu a adịchaghị ya mma n’obi.”
Ụfọdụ ndị na-echefu na ha enweela ndị ọgọ ma ọ bụ nne di na nna di. Nwoke ahụ aha ya bụ Chibueze kwukwara, sị: “Mmadụ na mmadụ nwere ike ịbụ enyi, e mechaa, ya ahapụ onye ahụ họrọ onye ọzọ. Ma, mmadụ agaghị ahapụli nne na nna di ya ma ọ bụ nne na nna nwunye ya gaa họrọ ndị ọzọ. O yiri ebe mmadụ na-agwa gị, sị, ‘I nweela ndị enyi abụọ ugbu a ma hà dị gị mma ma ha adịghị gị mma.’ Ha na-akpasugodị gị iwe, gị na ha ka bụ otu ezinụlọ.”
Ọ bụrụ na unu anaghị enwe otu olu n’ihe gbasara papa unu na mama unu, medaanụ obi kwurịta ya. ‘Chọọnụ udo, chụsookwanụ ya’ otú Baịbụl kwuru.—Abụ Ọma 34:14.
Ka anyị leba anya n’ihe atụ ndị ga-enyere anyị aka ime ihe a Baịbụl kwuru. Ihe atụ nke ọ bụla bụ ihe mmadụ nwere ike ịgwa di ya ma ọ bụ nwunye ya. Ma, ihe e kwuru na nke ọ bụla gbasara ma di ma nwunye. O nwekwara ike inyere ha aka ịma otú ha na nne na nna di ha ma ọ bụ nne na nna nwunye ha ga-esi na-adị n’udo.
Ka e were ya na ihe anaghị adabara gị na mama nwunye gị, nwunye gị agwa gị na ya ga-achọ ka gị na mama ya dịkwuo ná mma.
Megodị ihe a: Gbalịa ka gị na nwunye gị kpaa gbasara ya. Kweta ime ihe ụfọdụ o kwuru, ọ bụrụgodị na ọ bụghị ihe ị gaara achọ ime. Cheta na i kwere ya nkwa na ị ga-ahụ ya n’anya. N’ihi ya, ihe bụ́ ụka abụghị ma ihe ọ̀ na-adabara gị na ọgọ gị nwaanyị, kama ọ bụ ihe ga-eme nwunye gị obi ụtọ. Unu na-akpa gbasara ya, chebara ihe ndị ị ga-eme ka gị na mama ya dịkwuo ná mma echiche, gbalịakwa mee ha. Nwunye gị hụ na ị na-agba ezigbo mbọ ka gị na mama ya dị ná mma, ọ ga na-akwanyekwuru gị ùgwù.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: 1 Ndị Kọrịnt 10:24.
Ka e were ya na di gị gwara gị na ị na-eme ihe ọ bụla papa gị na mama gị gwara gị kama ime ihe ọ gwara gị.
Megodị ihe a: Gị na di gị kwurịta ya. Chebakwara ihe a o kwuru echiche. Di gị agaghị ekwu ụdị ihe a ma ọ bụrụ na ị na-asọpụrụ papa gị na mama gị otú i kwesịrị isi na-asọpụrụ ha. (Ilu 23:22) O nwere ike ịbụ na ọ chọrọ ka ị na-eme ihe ga-egosi na ị na-akwanyere ya ùgwù nakwa na i jighị ihe o kwuru egwu egwu. Ọ bụrụ na i mee ka obi sie di gị ike otú a, ọ gaghị echewe na ị na-ege papa gị na mama gị ntị karịa yanwa.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ndị Efesọs 5:33.
Ka e were ya na nwunye gị na-agakwukarị papa ya na mama ya ka ha gwa ya ihe ọ ga-eme kama ịbịakwute gị.
Megodị ihe a: Unu abụọ kwurịta ya ma kpebie ihe ndị unu kwesịrị ịna-akọrọ papa unu na mama unu na ihe ndị unu na-ekwesịghị ịkọrọ ha. Ihe unu kpebiri kwesịrị ịbụ ihe ga-adị unu abụọ mma. Ma, ọ̀ pụtara na o nweghịzi ihe unu ga-akọrọ papa unu na mama unu? Olee ụdị ihe unu nwere ike ịkọrọ ha? Ọ bụrụ na unu ekpebie ihe unu ga na-akọrọ ha na ihe unu na-agaghị akọrọ ha, ụdị ihe a agaghị esere unu okwu.—Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: Ndị Filipaị 4:5.
“Ka onye ọ bụla na-achọ, ọ bụghị uru nke ya, kama nke onye nke ọzọ.”—1 Ndị Kọrịnt 10:24.
“Onye bụ́ nwunye kwesịrị ịdị na-akwanyere di ya ùgwù nke ukwuu.”—Ndị Efesọs 5:33.
“Meenụ ka mmadụ niile mara na unu nwere ezi uche.”—Ndị Filipaị 4:5.
Na-echeta Ebe Ha Na-eme nke Ọma
Amarachi kwuru, sị: “Gị na nne na nna di gị ma ọ bụ nne na nna nwunye gị kwesịrị ịdị ná mma. Ọ bụ ha mụrụ di gị ma ọ bụ nwunye gị, zụọkwa ya. Ọ bụrụgodị na e nwere ihe ndị ha na-anaghị emetacha, i kwesịghị iji ha egwu egwu. I nwere ike ịmụta ọtụtụ ihe n’aka ha. Ọ bụrụ na ị na-echeta àgwà ọma ha ma gbalịa mụta ya, ọ ga-abara gị ezigbo uru ná ndụ.”—Jessica.
E nwere ihe ị ga-eme ka gị na ndị ezinụlọ unu dịrị n’udo, gị na di gị ma ọ bụ nwunye gị ana-ebikwa nke ọma.